Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu)
nnukwu pvc na-emechi ọnụ ụzọ
nnukwu pvc na-emechi ọnụ ụzọ Usoro nchịkwa ugboro ugboro, nke nwere ọnụnọ dị elu. A na-ejikarị ya eme ihe na-emepụta ihe oriri na-edozi ahụ na ngwá ọrụ ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na ebe ndị ọzọ. Ngwá dị elu nke igwe na-acha nchara anụ ọkụ, mgbatị nke na-eme ka a ghara imebi ihe, adịghị mfe nchara, mara mma ma sie ike....
2019 Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu
Ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ụlọ gị gafere 6 * 6 mita, mana ị ga-achọ ọnụ ụzọ dị elu. Biko matakwuo banyere ụzọ mega dị elu Ọnụ ụzọ dị elu: A na-eji ụgbọ mmiri eme ihe n'ụzọ pụrụ iche maka ọnụ ụzọ dị elu: ọnụ ụzọ atọ dị 380V; na otu oge 220 V ike: 0.55-1.5KW, IP55 50 HZ. Onu oghere 1.0 mm elu njupụta polyester fiber ma ọ bụ...
Ọnụ Ụzọ Ndozi Dị Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Ọnụ Ụzọ Ngwá Dị Elu Ọnụ Ụzọ Ndozi Diy Ọnụ ụzọ Zipụ Dị Elu Ọnụ Ụzọ Ndozi Akwụsị Ọnụ Ụzọ Ámá Nkuku Dị Elu Ọnụ Ụzọ Ákwà Ngwá Dị Elu